किसानको पहिलो रोजाइ अकबरे खोर्सानी, यसको खेती कसरी गर्ने?? (तरिका सहित) | CHALKHEL.COM
Home आर्थिक किसानको पहिलो रोजाइ अकबरे खोर्सानी, यसको खेती कसरी गर्ने?? (तरिका सहित)
किसानको पहिलो रोजाइ अकबरे खोर्सानी, यसको खेती कसरी गर्ने?? (तरिका सहित)
तेह्रथुम, ९ साउन ।
तेह्रथुममा अकबरे खुर्सानी व्यवसायिक खेती फस्टाउदै गएको छ ।
परम्परादेखि मसला बालीको रुपमा छिटपुट मात्रै खेती गर्दै आएका किसानले धान, मकै, कोदो लगायत अन्नबाली लाग्ने जमीनमा समेत अकबरे खुर्सानीको खेती थालेका छन् । कम मेहिनेत र लागतबाटै मनग्ये आम्दानी गर्न सकिने भएपछि खाद्यान्न बाली छाडेरै अकबरे खुर्सानीको खेती गर्न थालेका किसानले अन्नबाली भन्दा कम मेहिनेत र लागतले पनि अकबरे खेतीबाट आम्दानी हुन सक्छ भन्ने बुझेपछी यसको व्यवसायिक खेती थालेका हुन् ।
‘धान, मकै लगायत अन्नबालीको खेतीभन्दा यो धेरै सजिलो हुने र अन्नबालीबाट भन्दा अकबरे खेतीबाट तेब्बर बढी आम्दानी हुने किसानहरु बताउछन् । ठोपनी धेरै नचाहिने र मकै खेती गर्दा एक वर्षभरि मेहिनेत गरी बल्ल बलल धेरथोर मकै फल्ने गरेको तर अकबरे खेतीले आफ्नो जिवनस्थर निकै माथी उकासिएको किसानहरुको भनाइ छ ।
ब्यवसायिक खेतीमध्य अकबरे खोर्सानीपनी कृषकको प्राथमिकतामा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रोहिणीराज घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका ओयाक्जुङ, मोराहाङ, सुदाप, ओखे्र, हमरजुङ, फाक्चामारा, पन्चकन्या, बसन्तपुर, सोल्मा, सुङनाम, दाँगपा, श्रीजुङ, पौठाक, आम्बुङ, जिरिखिम्ती, छातेढुंगा लगायत गाउँहरुमा किसानले अकबरे खुर्सानीको व्यवसायिक खेती गर्न थालेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यो वर्षमात्रै जिल्लामा १२ करोड रुपैयाँको अकबरे खुर्सानी उत्पादन भएको छ । किसानले २५ हेक्टर जमीनमा लगाएको खेतीबाट यो वर्ष ३ सय १२ मेट्रिक टन उत्पादन गरेका कृषि विकास अधिकृत घिमिरेले बताउनुभयो । यो वर्ष अकबरे खुर्सानी जिल्लाका बजारमा प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँ सम्म कारोबार भएको छ । यस आधारमा जिल्लामा १२ करोड बढी रुपैयाँको अकबरे खुसानी उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अकबरे खुर्सानी लगाउदा उच्चकोटीको बिउ, राम्रो माटो र प्रांगारिक मल छनोट गर्दा उपयुक्त हुने र आम्दानी पनी दोब्बर हुने कृषी प्राबिधिकहरुको भनाइ छ । यसलाई अचारको रुपमा ब्यापक प्रयोग गरिदै आएको छ ।
Previous articleचितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका हात्तीसारेका लागि पहिलोपटक बीमा
Next articleपहिरोले भोटेकोशी नदीको पुल भाँचियो